ဗီတာမင် B 12 ၏အ​ရေးပါပုံ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း » ကျန်းမာရေးနဲ့ အာဟာရ » ဗီတာမင် B 12 ၏အ​ရေးပါပုံ
ဗီတာမင် B 12 ၏အ​ရေးပါပုံ
ရေးသားသူ Dr. Ye Pyae Hein ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. K Zin Thwe
-ကျန်းမာကြံ့ခိုင်သောကိုယ်ခန္ဓာ ဖြစ်ဖို့အတွက်အာဟာရအမယ်စုံအောင်စားဖို့လိုအပ်ပါသည်။ အရေးပါသောအာဟာရတစ်ခုမှာဗီတာမင် B12 ဖြစ်ပါသည်။ထိုဗီတာမင်သည်သင်ကျန်းမာရေးနှင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အမှန်အရေးပါသည်ကိုမသိရှိပါက ဤဆောင်းပါးကသင့်အတွက်အသုံးဝင်သောအသိပညာများကိုပေးပါလိမ့်မည်။
-ဗီတာမင်B12ကို ကိုဘယ်လမင်း (Cobalamine) ဟုလည်းခေါ်ပြီး အကြီးမားဆုံးနှင့် အရှုပ်ထွေးဆုံးဗီတာမင်ဖြစ်ပါသည်။ထိုဗီတာမင်ကိုသတ္တဝါတို့မှရသောပစ္စည်းများတွင်သဘာဝအတိုင်းတွေ့ရှိရပြီးဓာတ်ခွဲခန်းတွင်မူ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများမှထုတ်ယူရပါသည်။ထိုဗီတာမင်ကိုအများကြီးစားသုံးမိသောအခါပိုလျှံနေသည်ကိုအသည်းတွင် သိမ်းဆည်းထားပြီးလိုအပ်ချိန်တွင်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
(၁)ဗီတာမင် B12 ပါဝင်သောအစားအစာများ
-ပုစွန်၊အသည်း၊ငါးအမျိုးမျိုး၊ကဏန်း၊ပဲပိစပ်၊တို့ဟူး၊ပဲနို့၊နှံစား၊အဆီမပါသောအသား၊အဆီနည်းသောနွားနို့၊ဒိန်ခဲ၊နွားနို့တို့သည်ဗီတာမင် B12 ကြွယ်ဝသောအစားအစာများဖြစ်သည်။
၁၀၀ ဂရမ် တွင် ဗီတာမင် B12 ၉၈.၉ မိုက်ခရိုဂရမ်(1648%DV)
၃အောင်စ (၈၅ ဂရမ်)တွင် ၈၄.၁ မိုက်ခရိုဂရမ်(1401%DV)
ဂုံးအခြမ်း၂၀ (၁၉၀ ဂရမ်)တွင် ၁၈၇.၉ မိုက်ခရိုဂရမ်(3132%DV)
၁၀၀ဂရမ် တွင် ဗီတာမင် B12 ၈၃.၁မိုက်ခရိုဂရမ် (1386%DV)
၃အောင်စ (၈၅ဂရမ်)တွင် 70.7 မိုက်ခရိုဂရမ် (1178%DV)
အသား ၁လွှာ (၈၁ဂရမ်) တွင် ၆၇.၃ မိုက်ခရိုဂရမ် (1122%DV)
ငါး(Mackerel ဟုခေါ်သော ပင်လယ်ငါးတစ်မျိုး)
၁၀၀ဂရမ် တွင် ဗီတာမင်B12 ၁၉.၀ မိုက်ခရိုဂရမ်(317%DV)
၃အောင်စ (၈၅ ဂရမ်) တွင် ၁၆.၂ မိုက်ခရိုဂရမ်(၂၆၉%DV)
ငါးအသားလွှာတစ်ဖတ် (၈၈ ဂရမ်) တွင် ၁၆.၇ မိုက်ခရိုဂရမ်(၂၇၉%DV)
၁။စွမ်းအင်ရစေခြင်း-သင်၏ဆဲလ်များကိုအစာဝစေပြီးပျော်ရွှင်ကျန်းမာစေသည်။ဗီတာမင်မရှိလျှင်သင့်ဆဲလ်များကဆာလောင်နုံးချိ အားနည်းနေပြီး တစ်နေကုန်ခေါင်းငိုက်စိုက်ကျနေမည်။
၂။နှလုံးကိုကာကွယ်ခြင်း- B12 သည်နှလုံးနှင့်သွေးလှည့်အဖွဲ့တစ်ခုလုံးအတွက်လိုအပ်သောအာဟာရဖြစ်သည်။သွေးထဲတွင်ရှိသောအန္တရာယ်ရှိသည့် Homocysteine ဟုခေါ်သောပရိုတိန်းတစ်မျိုးကိုဖယ်ထုတ်ပေးသည်။ထိုပရိုတိန်းသည်သွေးကြောအပြင်သို့ ရောက်ရှိသွားပါကသွေးကြောများကိုပျက်စီးစေပြီးရောင်ရမ်းမှုနှင့်နှလုံးရောဂါကိုဖြစ်စေတတ်သည်။
၃။အရိုးကျန်းမာရေးအတွက်လိုအပ်ခြင်း- သုတေသနတစ်ခုက ဗီတာမင် B12 သည်အရိုးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်လိုအပ်ပြီးအရိုးပွခြင်းနှင့်အခြားရောဂါများကိုကုသရာတွင်ကူညီပေးသည်ဟု ဆိုသည်။
၄။အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုဟန့်တားပေးခြင်း- သွေးတွင်းဓာတ်တိုးစေသောပစ္စည်းများ၊အဆိပ် အတောက်များ၊သကြားဓာတ်မြင့်တက်ခြင်းနှင့်အိုမီဂါ ၆ အက်ဆစ်ပမာဏများပြားခြင်းတို့ကဆဲလ်များ၏ DNA ပွားများခြင်းကိုထိခိုက်စေသည်။ B12 သည် DNA ၏ကျန်းမာရေးကိုထောက်ကူပေးခြင်းဖြင့်သင့်ဆဲလ်များကိုနုပျိုစေသည်။
-B12 ပါဝင်သောနှံစားပြည့်ဝစွာ ပါဝင်သော နံနက်စာကိုစားပါ။
-သင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်၍ B12 ဆေးဝါးများသုံးစွဲပါ။
-ဗီတာမင် B12 သည်အကျိုးကျေးဇူးများစွာပေးနိုင်သောကြောင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဗီတာမင်B12 ပြည့်ဝနေစေရန် သင်စားသော အစားအစာများ၊ သင်၏ပြုမှုနေထိုင်ပုံနှင့်လိုအပ်သောအားဆေးများစသည်တို့ကိုသတိပြုသင့်ပါသည်။
1. Top 10 foods highest in vitamin B12, https://www.healthaliciousness.com/articles/foods-high- in-vitamin-B12.php Accessed 16 March, 2017
2. Brain Food: Top 12 Sources of Vitamin B12, http://www.goodhousekeeping.com/health/diet-nutrition/g1967/vitamin-b12- super-foods- 47012607/?slide=2 Accessed 16 March, 2017.
3. The top 10 foods for vitamin B12, http://www.globalhealingcenter.com/natural-health/top- 10-foods-vitamin-b12/ Accessed 16 March, 2017.
4.7important function of Vitamin B12, http://www.globalhealingcenter.com/natural-health/7- functions-of-vitamin-b12/ Accessed 16 March, 2017
5. 21 important facts about Vitamin B12 deficiency,
http://www.health.com/health/gallery/0,,20924065,00.html Accessed 16 March, 2017.
6. The best methods to increase vitamin B12 levels, http://www.livestrong.com/article/353625-the- best method-to- increase-vitamin- b12-levels/ Accessed 16 March, 2017.
ကလေးအတွက် ဘာရွေးမလဲ....အားဆေးလား...၊ ဖြည့်စွက်စာလား .....
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ သောက်ဖို့ မသင့်တော်တဲ့ ဖြည့်စွက်အားဆေးတွေက ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ ။